Ifektri Yokwenza Amanzi Yenziwe Ngamanzi - Abakhiqizi beTape baseChina Abasebenza, Abahlinzeki
Iteyipu ye-kraft eyenziwe yasebenza ngamanzi
Iteyipu lephepha elenziwe ngamanzi elenziwe ngamanzi lenziwe ngezinto zokwakheka zamaphepha e-kraft futhi zahlanganiswa nokunamathiselwa kwesitashi esidliwayo. Iyanamathela ngemuva kokudlulisa amanzi. Inobungani bemvelo futhi ayingcolisi. Ingabuye isetshenziswe futhi isetshenziswe kabusha imithombo. Ukuqinisekisa ukubambelela kwesikhathi eside ngaphandle komswakama.
Iphrintiwe i-kraft tape eqinisekisiwe esebenze ngamanzi nge-dispenser
Ithegi lephepha le-Wet Water Kraft
I-wet kraft paper tape ikakhulukazi yenziwe ngephepha le-kraft njengezinto eziyisisekelo, bese ishintshwa isitashi njenge-adhesive. Kumele ibe manzi ngaphambi kokuthi ikhiqize izakhiwo zokunamathisela. Kungabhalwa ephepheni le-kraft. Imboni ngokuvamile ibizwa ngokuthi ukunamathela kabusha kwephepha le-kraft. Ngemuva kokumanzi, inezici zokubambelela okuqinile kokuqala, amandla aqinile okuqina, nokumelana namazinga okushisa. I-substrate nokunamathela kwayo ngeke kungcolise imvelo, futhi kungabuye kusetshenziswe kabusha futhi kusetshenziswe kabusha nokupakisha.